Akhriso Cadaymo : Canshuur Boob Xooggan oo ka socda Dekadda Muqdisho. – Hornafrik Media Network
Tan iyo wixii ka dambeeyay markii is badal lagu sameeyay Maamulka Waaxda Canshuuraha Dekadda Muqdisho waxaa hareeyay Musuqmaasuq baahsan oo sababay in hoos u dhac uu soo wajaho Dhaqaalaha ka soo xarooda Waaxda Canshuuraha ee Dekadda Muqdisho.
Shabakadan isku xiran oo ka kooban Waaxda Canshuuraha ee Dekadda, Booliska Illaalinta Canshuuraha, iyo Taliska Booliska Soomaaliyeed ayaa ka sameeyay Lacag fara badan Dekadda Muqdisho, Waxaana Musuqmaasuqan sidoo kale ku lug leh Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somalia oo u diyaarsan inay ka difaacaan Musuqmaasuqan Hay’adaha kale ee Dowladda inay baaraan.
Axmad Samoow oo loo magacaabay 20-kii Bisha May ee Sannadkan Madaxa Canshuuraha Dekadda Muqdisho waxa uu hadda dhisanayaa Dabaq Dhow Biyaano ah oo uu ka dhisayo Degmadda Xamar Jajab. Waxaana Dabaqan ku baxaysa Lacag ka badan 1 Milyan oo Dollar.
Samoow oo ka tirsan Wasaaradda Maaliyadda sida uu qabo Xeerka Shaqaalaha Rayidka waxa uu noqonayaa qofka Agaasime Waaxeedka ah Mushaarkiisu $1,100 (Kun iyo Boqol Doolar), Wuxuuna isu gayn noqonayaa Mushaarkiisu 4-ta Bilood ee uu Xilka hayay $4,400.
Guri Samoow ka dhisanayo Xamarjajab
HornAfrik waxay ogaatay in Lacagta ugu badan laga helo Canshuurka Badeecadaha oo loo canshuuro si aan waafaqsanay Xeerka Canshuurta, Waxaana isku si loo Canshuuraa Kunteenarka uu ku jiro Bagaashka iyo Kan Moobayladu ay ku jiraan, Iyadoo Booliska Illaalinta Canshuuraha ee ay ahayd inay koontaroolaan Badeecadana ay qayb ka yihiin Musuq Maasuqa, taasoo u fududaynaysa Waaxda Canshuuraha ee Dekadda inaan la ogaan wax is daba marintooda.
HornAfrik waxay sidoo kale heshay Boonooyin Canshuur oo la been abuuray, kuwaas oo aan ka soo bixin Wasaaradda Maaliyadda, balse uu soo samaystay Madaxa Canshuuraha Dekadda, Axmad Samoow.
Mid ka mida Boonooyinkaas oo ay heshay HornAfrik waxaa lagu canshuuray Badeeco ka baxday Dekadda, iyadoona ay iska indha tireen Booliskii ay ahayd inay qabtaan.
Warqada Been Abuur ah oo Wax lagu Canshuuray.
Raiisulwasaare, Xasan Cali Khayre oo helay Xogta Musuqmaasuqan ayaa dhowaan booqasho kadis ah ku tagay Dekadda Muqdisho, Wuxuuna Xafiiska Samoow ka soo helay Warqaddo Been Abuur oo lagu Canshuuro Badeecadaha Dekadda, Balse waxaa arrintaasi ku baxay Xildhibaan Daahir Amiin Jeesoow oo Bil kasta laga siiyo Canshuurta Dekadda $3500, taasoo uu siiyo Axmad Samoow. Wuxuuna ku badashay Jeesoow inaan la xisaabtamin Samoow in isna uu taageero Xukuumadda sax iyo qalad.
Si aan loo oggaan Musuqmaasuqa ka jira Dekadda waxa uu Samoow ku bixiyay Lacag dhan $15,000 in Warbaahintu u samayso Xayaysiin been iyo Barnaamijyo lagu sheegayo inuu wax qabtay, kuwaas oo qaarkood ay dhawaan baahin doonto Warbaahinta ku hadasha Afka Dowladda Somalia.
Wasaaradda Maaliyadda waxay horay u sheegtay inuu kordhay Dakhliga ka soo xarooda Dowladda, Balse markii ay soo baxday Fadeexad ah inuusan warkaasi waxba ka jirin waxa uu mar kale Wasiirka Maaliyadda ka hor qirtay Baarlamaanka inuusan kordhin Dakhliga Dekadda ee uu sheegay isagoo qiiraysan.
Madaxwayne Ku Xigeenkii Iyo Gudoomiyihii Baarlamaanka Galmudug Oo Xilalka Laga Qaaday.